MAWDUUC 6: KALKACEEL IYO XIISO | Ung & Gravid
MAWDUUC 6: KALKACEEL IYO XIISO
Dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenkaro waxaa waaye waxa aad u fiican oona eh wax nolasheena kamid ah. Aduunka urrurkacaafimaadka, WHO, sidaan aye u sharxeen:
“Dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenkaro (seksualitet) waxeey kamidtayaha shaqsiyada, laga gooyi karin nolasha dhinaceeda. Dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenkaro ma’ahan sida camal marka aad sameeyneesid galmo, dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenkaro waa ka sii weeyntahay. Waxaa laga helaa quwad na siineyso aan raatsano kalgaceel, kulka aadanaha iyo isku dhawaasho. Dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenkaro waxey sameeyaan fikradooyinkeena, dareemo, ka shaqeynaayo iyo sida loola dhaqmo bini’aadanaha kale”
Hormoon (dheecaan qanjirada jiirku sameeyaan oo sameeya koriinka iyo isbadalka jirka)
Baaluqnimada waxaa waaye waqtiga jirkeena isku diyaarinaayo in oo sameeyn karo iyo xaalada ku sameynlahaa ilmo. Markii aan ka hadleyno qaangaarnimo, waxaa ka fikereynaa isbadalka adiga kuugu dhacaayo markii aad ka soo bexeeysid ilmonimada aad u socotid qof weeyn. Waa caadi in la helo xanaaq badan, iyo in ey fududahay in guuriga laga murmo. Dad badan ayaa waalidkood ka dhaxmaraa wadahadal kull iyo adaab fiicneeyn. Kani waxaa waaye waqti muhiim in aad ogaatid qofkaa tahay iyo in aad noqotid shaqsi.
Waxaa la sameeynaa hormoono cusub, waad garaneysaa damaca iyo rabitaanka aad u baranin. Tani waxey boos u firaaqeyney dareemo, saaxiibtinimo iyo kalgaceel. Sidaas iyaadoo tahay ayaad ka khibrat qaadaney dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenykaro kulankaas waxey furey dareemo xoog leh buuxineysa boos xigtinimo, is dhiibid, cidlo iyo kelinimo dareemid iyo walwal.
Banaan keenida dareemaha raga iyo dumarka ka dhaxeenkaro
Dad badan ayaa u maleeyaan in dadkale banaaka ey keeneen doonista galmada iyaga hortood. Taas markasta sax ma’ahan. Caadi gabdhaha banaaka waxey imaadaan marka ey jiraan 17 sano wiilashane waxey imaadaan 18 sano marka ey jiraan. Qaarkood waxey ku bilaabaan marka ey yihiin 13 iyo 14 sano, qaarneh waxey sugaayaan ilaa inteey ka dhaafayaan 20.
Dhaqan iyo dareenka raga iyo dumarka ka dhaxeeynkaro
Dareenka raga iyo dumarka ka dhaxeeynkaro waxaa waaye dhismaha iyo mohiimada ka mid eh aadaanka. Wax akhlaaqda ama anshaxa la xiriira dareenka raga iyo dumarka waa wax la kala dhaxla. Sida caadiga ah dareenka raga iyo dumarka ka dhaxeenkaro waxaa hogaamiyo dhaqanka iyo diinta. Dhaqamada bandankood qoyska weyn ayaa xukuma. Tobanka sano ugu danbeeyey waxey Noorway noqotay bulsho ka kooban dhaqama badan. Markii ey dhaqanada isla kulmaan waxa arkeynaa midba midka kale tastuurkiisa iyo hiddaha iyo dhaqanka ey wataan. Taas waxey la midtahay sida u kala duwantahy araktida dareenka raga iyo dumarka ka dhaxeenkaro, waxa la oggol yahay iyo waxaan la oggoleen, kala nooca aragtida jinsiga (lab ama dheddig), waxayaabaha loo oggolyahay gabardhaha iyo waxa loo oggol yahay wiilasha. Qaar badan ayaa u haystaan hiddo iyo dhaqan kooriimaddaa ku saabsan dareemaha raga iyo dumarka ka dhaxeenkaro in ey ku dhacaan meel gaar ayaga u ah, iyo qaar dareensan in taageeraan iskoolka ka soo qeebqaato mawduucaan. Waalidka qaarkood waxey ku fikiraan laga yaabee hadii qof kala hadlo dhalanyarta wax ku saabsan galmad, in dhalanyarta heer ku gaaraan in ey ku dhaqaaqaan galmada.
Dhaqamada badankood raga ayaa u eh madax, iyo wiilashoo haystaan xuriyad badan hadii lees barbardhigo gabdhaha. Gabdhaha weey ka xuriyad yaryihiin wiilasha, iyo dhamaan la xiiseynaayo in gabarta ey asturnaato oo la dhowro inta laga guursanaayo.
Maxey kula tahay in isbadal badan dhaco markii waqtigaas kujirtid?
Mieey kala duwanyihiin sida wiilasha iyo gabdhaha ee u hadlaan marka laga hadlaayo galmo?
Miyeey tahay caadi in eey dhalanyarta ku faanaan khibrada galmoon?
Ma laga yaabaa in eey tahay wax aad u furan iyadoo laga hadlaayo galmo?
Ma arkeey saa wax ka duwan dhaqamaha kala nooca ah oo ku saabsan deernka raga iyo dumarka ka dhexdooda?
Ka shaqayn: Internettka karaadi iyo ka soobixi wax ku saabsan waxyaabaha isbadalka jirkeena ka dhacadhaca.